FollowUpThen: Free na Easy Email Na-echetara | Martech Zone
Wenezdee, Machị 25, 2015 Monday, April 25, 2016 Douglas Karr
Enwere m mmasị ịkesa ụfọdụ ngwaọrụ arụpụtara nke m na-eji jikwaa ozi ịntanetị buru ibu. Otu afọ gara aga, akwadoro m (ma ka na-ejikwa ya) Kpoo nke na-enyocha ntinye aka email iji melite nkọwa kọntaktị. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ abụọ gara aga, m akọrọ Unroll.me - nnukwu usoro m ka na-eji na-anakọta ma chịkọta ozi ịntanetị n'ime otu email iji belata mkpọtụ ahụ.
Taa, m na-ekere òkè Soro. Nke a bụ nnukwu ihe atụ nke otu m si eji ya. Anyị na-arụ ọrụ na atụmanya ma ọ bụ onye ahịa ma ha zitere m ozi ma mee ka m mara na ha ga-achọ ijikọ m ma ha ga-apụ n'obodo ma ọ bụ na-agwụcha ọrụ. Ha na-ajụ ma m nwere ike imetụ isi na izu ole na ole.
Enweghị nsogbu, m na - ezipụ email na ya 2weeks@followupthen.com. Soro wee hazie email ka ọ bịaghachikwute m ka izu abụọ gachara. Enweghị mwube ncheta na kalenda m ma ọ bụ na-agbakwunye ọrụ ọzọ na listi ọrụ m… naanị 2 sekọnd ka ibugharịa email.
Soro ọbụnadị na - eme ka ọ dị mfe site na ịza aha ndebanye aha gị na nzaghachi email niile na - agbakwunye ozi ịntanetị ndị ị ga - eji. N'ụzọ dị otú a, ha na-agbapụta na ngwa ahịa gị na onye ahịa email gị!
Iji malite iji Soro, dị nnọọ ikpegara email na-agụnye [oge ọ bụla] @ followupthen.com na CC, BCC ma ọ bụ TO ubi nke email gị.
Methodzọ nke ọ bụla dịtụ iche:
Bcc Natara ntinye site na email, mana FollowUpThen agaghị ezigara onye mbụ natara ozi.
IWU Eziga email ka ọdịnihu gị.
CC Hazie oge ncheta maka gị na onye nnata.
I nwekwara ike nbanye na saịtị ha ma hụ ihe ncheta gị na-echere! Ọ bụrụ n'ịchọrọ njikọta kalenda, ihe ncheta SMS, nchọpụta nzaghachi ma ọ bụ chọọ ịtọlite ​​otu, Soro -enye ụfọdụ ọnụ upsell nchịkọta.
Tags: ihe ncheta emailemail ngwaọrụna-esochi
Chris Ndidi (@nwachukwu)
M na-eji ya otu ụzọ ma chee nnukwu. Dị otú ahụ dị mfe azịza a ugboro ugboro nsogbu